April 2017 - Ceelhuur Online
April 30, 2017 admin160
Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Cadaado xarunta kumeelgaarka dowlad goboleedka Galmudug. Xaashi ayaa safarkiisa waxaa ku wehliyey gudoomiye ku xigeenka Barlamaanka Galmudug Xareed Cali Xareed, iyo masuuliyiin kale. Wafdigaan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Cadaado kusoo dhaweeyey gudoomiye ku xigeenka 2-aad Barlamaanka Galmudug iyo madax […]
Sheekh Shaakir oo Eedeyn u jeediyey Dowlada Federaalka ah
April 30, 2017 admin173
Madaxweynaha Maamulka Ahlusuna Waljameeca Sheekh Maxamed Shaakir cali Xasan ayaa Dowlada Soomaaliya ku eedeeyey inay qeyb ka tahay Guul-darada Wada hadaladii Galmudug iyo Ahalusun kuwaas oo xal loogu raadinayey Khilaafka Siyaasadeed ee mudda u dhexeeyey labada dhinac. Axmed Shaakir oo Shalay kusoo laabtay degmada Guricel ayaa Sheegay Dowlada Farmaajo ku socoto wadadii dowladii hore, isagoo […]
April 29, 2017 admin167
Sida ay qortay wakaalada wararka ee Anadolu ee dalka Turkiga, Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa booqasho rasmi ah ku tagaya dalka itoobiya. Wakaalada oo xiganaysa diblumaasi sare oo u dhashay itoobiya, ayaa sheegtay in booqashadan qaadan doonto 2 maalmood, waxayna bilaaban doontaa maalinta Arbacada 3 May 2017. Waa safarkii ugu horeeyey ee Madaxweyne […]
April 29, 2017 April 29, 2017 admin175
Gudiga doorashada Madaxweynaha Galmudug oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Cadaado ayaa sheegay in doorashada Madaxweynaha dib loo dhigay ilaa 3 bisha May 2017, iyadoo horey loogu madlanaa 30 April. Gudoomiyaha Guddiga Xildhibaan Maxamed Xasan Geelle ayaa intaa ku daray in dib u dhigistaan ay tahay arimo farsamo, si loo helo waqti ku fulan […]
April 29, 2017 admin179
April 28, 2017 admin160
Musharaxa jagada Madaxweynaha dowlad goboleedka mudane Axmed Cali Hilowle (Axmed Shariif ) ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyey magaalada Cadaado. Musharaxa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Cadaado ku soo dhaweeyey Madaxda iyo Shacab farabadan, waxaana kadib loo galbiyey Hotel Central halkaas oo uu kula hadlay qeybaha kala duwan ee bulshada. Gudoomiyaha degmada Cadaado Tootoole, Madaxweyne […]
April 28, 2017 admin179
Musharax Cabdulqaadir Maxamed Shirwac oo u sharaxan xilka Madaxweynaha Galmudug ayaa la gudoonsiiyey shahaadada Musharaxnimada. Shahaadadan waxaa gudoonsiiyey guddiga doorashada Madaxweynaha Galmudug, Prof Shirwac ayaa noqonaya musharixii ugu horeeyey ee la gudoonsiiyo Shahaadada. Shahadaadan ayaa cadeynaysa in musharaxu soo buuxiyey dhammaan shuruudihii laga rabay Mushaxa.
April 27, 2017 April 27, 2017 admin153
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa warmurtiyeed kasoo saartay wadahadalkii magaalada Muqdisho uga socday Dowlad goboleedka Galmudug iyo Ahlu sunno. Warmurtiyeedkaan oo ka kooban 9 qodob ayaa waxaa ku sixiixnaa wasiirka Arimaha Gudaha iyo Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Siciid Juxa. Hoos ka akhriso warmurtiyeedka.
April 27, 2017 admin153
Shiikh Xasan Daahir Aweys ayaa muuqaal uu soo duubay kaga hadlay kooxda Alsaadicuun Bil Xaq, Sheekh Xasan ayaa muddo 5 sanno ah u xiran dowlad Federaalka. Halkaan hoose ka daawo muuqaalka.
April 27, 2017 admin158
Guddigii dowlad goboleedka Galmudug u matalayay Wada hadalada u dhaxeeya Ahlusunna iyo Galmudug ayaa goor dhow shir jaraa’id oo ay ku qabteen Hotel Syl magaalada Muqddisho waxa ay ku dhawaaqeen inuu bur buray Wada Hadaladii ay la lahaayeen Ahlusuna ee ka socday magaalada Muqdisho. Shirkan jaraa’id ayey Guddigu ku shaaciyeen inuu gebi ahaanba istaagay wada […]